SomaliTalk.com » Alshabaab intii la is watey maxaa wax loogu sheegi waayey?. Qeybta 1aad
Salaan ka dib walaalayaal waxaan idiin rajaynaynaa idinka, ahalka iyo walaalahaba khayr, annaguna – Alle ayaa mahad lehe – aad baan u ladanahay.
Walaalayaal qoraalkaan waxaan idiinku soo gudbinaynaa warbixin ku saabsan dhacdooyinkii Muqdisho labadii usbuuc ee la soo dhaafay, kadibna waxaan soo jeedinaynaa talooyin ku aaddan arrimahaas.
Maalintii sabtida ee 18/02/06 ayaa lagaga dhawaaqay deegaanka Dayniile isbahaysi loogu magacdaray Isbahaysiga Nabadda iyo La dagaallanka Argagaixisada oo ay xubno ka yihiin toban nin oo sagaal ka mid ah la shaaciyey magacyadooda, waxaana ka mid ahaa:
7. Nimanka WAHAABIYADA ah oo iyagu la yimid manhaj ka soo horjeeda kan Soomaalidu haysato oo ah Shaaficiya Suufiyo ah.
Isla maalintii lagu dhawaaqay isbahaysiga ayaa lagu soo qaaday duullaan fadhiyo ay lahaayeen ciidamada maxkamadaha islaamiga ah. Ka dib waxaa halkaa ka qarxay dagaal dhexmaray labada dhinac oo si buuxda loogaga adkaaday isbahaysigii duullaanka soo qaaday dhinac millatari iyo dhinac siyaasadeedba.
Waxaa ka dhashay dagaalkaas in uu xirmo garoonkii diyaaradaha Dayniile oo uu haystay Max’ed Qanyare, laguna durko deegaanadii ay joogeen isaga iyo Cabdi waal. Dagaalkaas waxaa si buuxda uga qayb qaatay bulshadii ku dhaqnayd Muqdisho gaar ahaan dadkii ehlu diinka ahaa oo xiray waddooyinkii, lana istaagay qoryo si aan gurmadka isbahaysigu isugu gudbin, waxay kale oo mawqifkooda ku muujiyeen xamaas, kaalmo, xagga ciidankana dad badan oo mutadawiciin ah ayaa goobihii soo dhoobtay.
Waxaa Rabbi dadka tusay cawradooda, waxaa kale oo jabkooda ka qayb qaatay qalabka warbaahinta oo si wacan ceebohooda u soo bandhigay, waxaana ka hadlayay arrimahaas Culimada, siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka kalaba.
Waxaa soo baxay in qabiilka Murusade oo deegaankooda laga soo qaaday duullaanka ay iyaguna u qaataan in dagaalakaan ay Habar gidir ku qabsanayso deegaankooda iyo hubkooda; sidaa darteed waxay u gurmadeen Qanyare ka dib markii la jabiyay ciidankii isbahaysiga.
Waxay kale oo ka dalbadeen Midawga maxaakimta in dagaalka la joojiyo; maxaa yeelay waxaa ku baaba’aya, kuna barakacaya dadka rayadka ah. Waxay kale oo sheegeen in aysan taageersanayn isbahaysiga, isla markaana aysan ka reebi karin Qanyare isbahaysigiisa, isna uusan oggolayn in uu la xaajaysto maxaakimta, laakiin odayaashu waxay ballanqaadayaan in aan deegaankooda mar kale laga soo weerarin, ugu dambayntiina sidaas ayaa dagaalkii lagu joojiyay iyadoo la ilaalinayo danta guud iyo dareenka qoyskaas.
Waxaa kale oo aad u muuqday in qabiilka Habargidir gaar ahaan Cayr si buuxda ugu jiro dagaalka iyagoo la saftay maxaakimta, waxaana ka yimid Kismaayo iyo inta ka sokaysa gurmad ciidan oo Cayr ah, taas oo keentay in dad badani ku doodaan in dagaalku mid qabiil yahay, waxaase si cad u beeniyay arrintaas labadii dhinac ee dagaalku dhex maray (maxkamadaha iyo isbahaysiga), sidaas oo ay tahay ayaa maxkamadda Murusade sheegtay in aysan wax lug ah ku lahayn dagaalka, uuna yahay mid la marin habaabiyay isniintii ka dib oo ujeeddoooyin kale lagu wato (Fiqi tolki kama janno tago), waxaanse filayaa in aysan saamayn weyn ku yeelan bulshada.
Waxyaabaha kale ee ay tahay in la soo qaado waxaa ka mid ah in ay maxkamadaha ku daaban yihiin dad kale oo ay is hayaan qolayaha isbahaysiga, sida X. Abuukar Cumar Caddaan oo Bashiir Raage uu ka qabsaday hub iyo fadhiyo uu ku lahaa dariiqa dekadda Ceel-macaan. Waxaa kale oo ka mid ah Yuusuf Indha cadde iyo Cayr-ka kale oo doonaya in ay difaacdaan gobolka Sh/hoose gaar ahaan airport-ka Balli doogle oo wararka qaar sheegayaan in isbahaysigu doonayo in uu ka qabsado intaba, sidaa darteed waxaa muuqata in dagaalku si ballaaran u soccon doono, ayna isu hub uruursanayaan labada dhinacba.